လူတိုင်းချမ်းသာစေရန် လေ့လာသင့်သော နည်း ဗျူဟာ (၇)ခု – Zartiman
Zar Ti Man | December 12, 2020 | Knowledge | No Comments
သင့်ကိုယ်သင် ဆင်ခြေမပေးပါနဲ့ – ပုံမှန်ဝင်ငွေတွေကို စုဆောင်းနေတာကနေ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုနဲ့ ရပ်လိုက်တာမျိုး မလုပ်မိပါ စေနဲ့။ ဒီလတော့ ပင်ပန်းလို့ ပိုသုံးလိုက်မယ်။ အဝတ်အစားနဲနဲ ပိုဝယ်လိုက်မယ်စတဲ့ သင့်ကို အကျင့်ဖြစ်သွားစေပြီး အချိန်ကြာလာသည် နှင့် အမျှသင့်ရဲ့စုဆောင်းလိုစိတ်တွေ ပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ အမှားလုပ်မိမှာ မကြောက်ပါနဲ့ – အပြောင်းအလဲတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ကြိုးစား တိုင်း မှားသွားမလားဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး ခံစားနေရတယ်ဆိုရင် ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ အမြန်ဆုံး ကြိုးစားရမှာပါ။ အလုပ်လုပ်နေသရွေ့ မှားယွင်း မှုကို ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး သင်ခန်းစာယူဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အမှားတွေကနေတစ်ဆင့်ပြန်ပြီး သင်ခန်းစာ ယူနိုင် သလို ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ လူတွေရဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အမှားတွေကနေ တစ် ဆင့် သင်ခန်းစာယူဖို့ကြိုးစားပါ။
ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကို သိထားရမယ်။သင်အလုပ်တွေဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစားလုပ်လုပ် ဒီအလုပ်ကို ဘာအတွက် လုပ်နေလဲဆိုတာ ကို သင့်ခေါင်းထဲမှာ ရှင်းလင်းဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှ နောက်တစ်ဆင့်ကို တက်လမ်းဖို့အတွက် အဆင်သင့် ဖြစ် နေမှာဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ရည်မှန်း ချက်ကိုလည်း မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရောက်စေမှာပါ။ အလုပ်ကရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို ဘယ်လိုအကျိုးရှိစွာ သုံးရမ လဲ။ ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲ။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ တစ်ခြားနေရာတွေမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမလဲ? ဆိုတာတွေကို သင့်ခေါင်းထဲမှာ အမြဲတွေးနေရမည့် အချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်နဲ့ ဝင်ငွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်းက ချမ်းသာတဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်ရှိသွားစေမှာပါ။ ဖြတ်လမ်း နည်းမသုံးပါနဲ့။သင့်ရဲ့ဝင်ငွေဟာ ဘယ်လောက်ပဲနည်းနေပေမယ့် သင့်ဝင်ငွေတွေ ပိုများလာစေဖို့ ဖြတ်လမ်းနည်းဖြင့် မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။
လက်ရှိ အလုပ်ကို ကြိုးစားရင်း ဝင်ငွေတိုးအောင်လုပ်သင့်သလို ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ အချို့အလုပ်တွေကို အစပျိုးပြီး လုပ်ကြည့်တာ မျိုးက ပိုပြီးတော့ကောင်းမွန်ပါတယ်။ စွန့်စားမဲ့ အခြေအနေကိုသတိထားပါ ။ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲဖို့ အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက်အန္တရာယ်ကင်းပြီး ဝင်ငွေတိုးနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေတာက ပိုပြီးတော့ ကောင်းပါတယ်။မတူညီတဲ့ အမြင်တွေကနေ စဉ်းစားပါ ။သူများတွေထက်ပိုပြီး အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် တစ်ခြားသူတွေနဲ့ မတူတဲ့အမြင်၊ အတွေးအခေါ်မျိုး တွေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပြီး လူတွေရဲ့ စိတ်ကိုနားလည်နိုင်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ဒါမှ တစ်ခြား လူတွေနဲ့ကွဲပြားတဲ့ အလုပ်တွေကို တီ ထွင်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး သင့်ဘဝတက်လမ်းအတွက် အကျိုးရှိလာမှာပါ။ ပိုက်ဆံရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်ပါ။
ပိုက်ဆံများများရှာနိုင်တဲ့အချိန်မှာ ပိုက်ဆံတန်ဖိုးကို နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ရနေတဲ့ဝင်ငွေ အားလုံးကို ပြန်သုံးပစ် တာနဲ့ ကုန်သွားရင် သင့်အတွက် ဘာအခွင့်အရေးမှရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ဝင်ငွေထဲက ပမာနတစ်ချို့ကို စုဆောင်းထားပြီး သင့် ရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေ (သို့) အနာဂါတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေအတွက် အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ လူချမ်းသာတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ ချမ်းသာ တဲ့ မိသားစုမှ မွေးဖွားလာဖို့မလိုပါဘူး။ အောင်မြင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးက ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန်ပြီး ကြိုးစားခဲ့ကြရတဲ့ လူတွေပါပဲ။ သူတို့အ နေနဲ့ ဒီလိုချမ်းသာအောင် ဘယ်လိုမျိုး စွမ်းဆောင်ခဲ့တာလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သငျ့ကိုယျသငျ ဆငျခွမေပေးပါနဲ့ – ပုံမှနျဝငျငှတှေကေို စုဆောငျးနတောကနေ အကွောငျးပွခကျြတဈခုခုနဲ့ ရပျလိုကျတာမြိုး မလုပျမိပါ စနေဲ့။ ဒီလတော့ ပငျပနျးလို့ ပိုသုံးလိုကျမယျ။ အဝတျအစားနဲနဲ ပိုဝယျလိုကျမယျစတဲ့ သငျ့ကို အကငျြ့ဖွဈသှားစပွေီး အခြိနျကွာလာသညျ နှငျ့ အမြှသငျ့ရဲ့စုဆောငျးလိုစိတျတှေ ပြောကျသှားမှာဖွဈတယျ။ အမှားလုပျမိမှာ မကွောကျပါနဲ့ – အပွောငျးအလဲတဈခုခုလုပျဖို့ ကွိုးစား တိုငျး မှားသှားမလားဆိုတဲ့ အတှေးမြိုး ခံစားနရေတယျဆိုရငျ ပွောငျးလဲပဈဖို့ အမွနျဆုံး ကွိုးစားရမှာပါ။ အလုပျလုပျနသေရှေ့ မှားယှငျး မှုကို ရငျဆိုငျရမှာဖွဈပွီး သငျခနျးစာယူဖို့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးဖွဈပါတယျ။ သငျ့ရဲ့အမှားတှကေနတေဈဆငျ့ပွနျပွီး သငျခနျးစာ ယူနိုငျ သလို ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြကနေ လူတှရေဲ့ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ အမှားတှကေနေ တဈ ဆငျ့ သငျခနျးစာယူဖို့ကွိုးစားပါ။
ဘာဖွဈခငျြလဲဆိုတာကို သိထားရမယျ။သငျအလုပျတှဘေယျလောကျပဲ ကွိုးစားလုပျလုပျ ဒီအလုပျကို ဘာအတှကျ လုပျနလေဲဆိုတာ ကို သငျ့ခေါငျးထဲမှာ ရှငျးလငျးဖို့ လိုပါတယျ။ ဒါမှ နောကျတဈဆငျ့ကို တကျလမျးဖို့အတှကျ အဆငျသငျ့ ဖွဈ နမှောဖွဈပွီး သငျ့ရဲ့ရညျမှနျး ခကျြကိုလညျး မွနျမွနျဆနျဆနျ ရောကျစမှောပါ။ အလုပျကရတဲ့ ပိုကျဆံတှကေို ဘယျလိုအကြိုးရှိစှာ သုံးရမ လဲ။ ဘယျလိုစီမံခနျ့ခှဲမလဲ။ ဘယျလိုနညျးနဲ့ တဈခွားနရောတှမှော ရငျးနှီးမွုပျနှံမလဲ? ဆိုတာတှကေို သငျ့ခေါငျးထဲမှာ အမွဲတှေးနရေမညျ့ အခကျြတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ သငျ့ရဲ့အလုပျအကိုငျနဲ့ ဝငျငှကေို မှနျမှနျကနျကနျ စီမံခနျ့ခှဲနိုငျခွငျးက ခမျြးသာတဲ့ လမျးကွောငျးပျေါ ရောကျရှိသှားစမှောပါ။ ဖွတျလမျး နညျးမသုံးပါနဲ့။သငျ့ရဲ့ဝငျငှဟော ဘယျလောကျပဲနညျးနပေမေယျ့ သငျ့ဝငျငှတှေေ ပိုမြားလာစဖေို့ ဖွတျလမျးနညျးဖွငျ့ မဆုံးဖွတျပါနဲ့။
လကျရှိ အလုပျကို ကွိုးစားရငျး ဝငျငှတေိုးအောငျလုပျသငျ့သလို ကိုယျကြှမျးကငျြတဲ့ အခြို့အလုပျတှကေို အစပြိုးပွီး လုပျကွညျ့တာ မြိုးက ပိုပွီးတော့ကောငျးမှနျပါတယျ။ စှနျ့စားမဲ့ အခွအေနကေိုသတိထားပါ ။ဘဝတဈခုလုံးပွောငျးလဲဖို့ အရေးကွီးတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြ ခဖြို့ လိုပါတယျ။ ကိုယျ့အတှကျအန်တရာယျကငျးပွီး ဝငျငှတေိုးနိုငျမဲ့ နညျးလမျးတှကေို ရှာဖှတောက ပိုပွီးတော့ ကောငျးပါတယျ။မတူညီတဲ့ အမွငျတှကေနေ စဉျးစားပါ ။သူမြားတှထေကျပိုပွီး အောငျမွငျခငျြတယျဆိုရငျ တဈခွားသူတှနေဲ့ မတူတဲ့အမွငျ၊ အတှေးအချေါမြိုး တှေးနိုငျဖို့ ကွိုးစားရမှာဖွဈပွီး လူတှရေဲ့ စိတျကိုနားလညျနိုငျဖို့လညျး လိုပါတယျ။ ဒါမှ တဈခွား လူတှနေဲ့ကှဲပွားတဲ့ အလုပျတှကေို တီ ထှငျလုပျကိုငျနိုငျပွီး သငျ့ဘဝတကျလမျးအတှကျ အကြိုးရှိလာမှာပါ။ ပိုကျဆံရဲ့တနျဖိုးကိုနားလညျပါ။
ပိုကျဆံမြားမြားရှာနိုငျတဲ့အခြိနျမှာ ပိုကျဆံတနျဖိုးကို နားလညျဖို့လိုပါတယျ။ ဒီလိုမှမဟုတျဘဲ ကိုယျရနတေဲ့ဝငျငှေ အားလုံးကို ပွနျသုံးပဈ တာနဲ့ ကုနျသှားရငျ သငျ့အတှကျ ဘာအခှငျ့အရေးမှရှိတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ သငျ့ရဲ့ဝငျငှထေဲက ပမာနတဈခြို့ကို စုဆောငျးထားပွီး သငျ့ ရဲ့အရေးပျေါအခွအေနေ (သို့) အနာဂါတျရငျးနှီးမွုပျနှံမှုတှအေတှကျ အသုံးဝငျပါလိမျ့မယျ။ လူခမျြးသာတဈယောကျ ဖွဈလာဖို့ ခမျြးသာ တဲ့ မိသားစုမှ မှေးဖှားလာဖို့မလိုပါဘူး။ အောငျမွငျတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျအားလုံးက ကိုယျ့ထူးကိုယျခြှနျပွီး ကွိုးစားခဲ့ကွရတဲ့ လူတှပေါပဲ။ သူတို့အ နနေဲ့ ဒီလိုခမျြးသာအောငျ ဘယျလိုမြိုး စှမျးဆောငျခဲ့တာလဲဆိုတာကို ဖျောပွပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။